Ukushiswa lilanga kunqunu kanye nezinzuzo zako eziyinhloko | Bezzia
Manje njengoba isimo sezulu esihle sesifikile, kungenzeka ukuthi uyacabanga ukushona kwelanga enqunu. Ngoba ingenye yalezo zinqubo ezivame ukutuswa futhi inezinzuzo eziningi okufanele uzicabangele. Yebo, noma nini lapho sifika ngaphansi kwelanga, kumelwe sithathe izinyathelo zokuphepha ezeqisayo ukuze sinakekele isikhumba sethu.
Ngakho-ke uma sikwenza sinqunu, kuzomele ukucabangele nakakhulu. Njengoba ezinye izindawo zomzimba zizwela kakhulu kunezinye. Sesikushilo lokho, kusasele ukwazi izinzuzo zokukwazi ukushiswa yilanga njengoba uNkulunkulu ekulethe emhlabeni. Mhlawumbe kule sizini uzogqugquzelwa ukuthi uyishiye eceleni ingubo yokubhukuda!
1 Ukushisa ilanga unqunu kuzokwandisa amazinga akho kavithamini D
2 Ithuthukisa imizwa
3 Impilo eyengeziwe yenhliziyo yakho
4 Umuzwa wenkululeko eyengeziwe
5 Ikuvikela kushukela
Ukushisa ilanga unqunu kuzokwandisa amazinga akho kavithamini D
Nakuba akudingekile ukukhumula ngenxa yalokho, yebo ukuthi ukushisa kwelanga kuzokwenza amazinga kavithamini D abe ngcono. Ingenye yalawo mavithamini abalulekile emathanjeni aqinile nanempilo. Ngakho-ke izosusa zonke izinhlobo zezifo ezihlobene nazo. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi ngenxa yale vithamini kuneminye imisebenzi yomzimba engalawulwa. Njengoba futhi inezindawo zokulwa nokuvuvukala. Ngakho uyazi ukuthi kuyinto ebalulekile empilweni yakho nasempilweni yakho.
Iqiniso liwukuthi kubantu abaningi ukushisa ilanga unqunu kungenye yemikhuba emihle kakhulu. Njengoba izokwandisa i-serotonin futhi ngayo, ukuze uzizwe ugqwayiza kakhulu. Ngakho-ke lokhu kuyohlale kuletha umuzwa wenjabulo esiwufanelekela kahle. Kodwa hhayi lokho kuphela, kodwa futhi, ngalowo muzwa wokuthuthukiswa kwemizwelo, singasho futhi ukuthi ukucindezeleka kushiywe eceleni. Sihlala sizama ukuthola izinketho zokuzikhulula ekucindezelekeni futhi-ke, ukushisa ilanga kungaba okunye okuhle kakhulu. Uzozizwa ungcono kakhulu ngazo zonke izikhathi, ukhululeke kakhudlwana futhi lokho kuyizindaba ezinhle njalo.
Impilo eyengeziwe yenhliziyo yakho
Kungumshini oyinhloko womzimba wethu ngakho-ke, kufanele siwunakekele kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, ukushisa ilanga kuyilungele inhliziyo ngoba kuthiwa kwehlisa umfutho wegazi. Uyazi kakade ukuthi lesi esinye sezizathu eziyinhloko zezifo zenhliziyo ezahlukene. Ngakho-ke, lapho sikunqanda, sizozizwa singcono kakhulu futhi, sizosusa zonke izinhlobo zezinkinga. Yebo, futhi kufanele sikhulume ngokuba ne-vitamin D eyengeziwe ngoba ingenye ezokwenza inhliziyo yethu ibe nempilo kakhulu.
Umuzwa wenkululeko eyengeziwe
Impela ezikhathini eziningi, lapho uya olwandle, uyazi ukubhukuda. Kwesinye isikhathi liyaqina, kwesinye isikhathi liyehla futhi lingahlala luxabanisa usuku lwethu kancane. Nokho, enye inzuzo yokushiswa yilanga unqunu ukuthi ngeke ube nezinkinga ezifanayo. Inkululeko izoba yinketho yakho engcono kakhulu ukuze ukwazi ukujabulela usuku wenza lokho okuthanda kakhulu futhi uzuze impilo eyengeziwe, ngenxa yazo zonke ezinye izinzuzo ebesiphawula ngazo.
Ubuwazi ukuthi ukushisa ilanga nakho kuhle ekuvimbeleni isifo sikashukela? Yebo, kunjalo futhi kufanele ukucabangele. Yiqiniso, lokhu kuphinde kuhlobene ngandlela-thile novithamini D, okubonakala sengathi unamandla cishe yonke into ehlobene nelanga. Noma ngabe kunjalo, ukuba namazinga amahle ale vithamini nokushiswa yilanga kuhlobene futhi kuphinde kusisize kwezinye izici eziningi zempilo yethu.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuzama ukushisa ilanga unqunu, ngokuqinisekile uzothola ulwandle olunikeza inketho nokuthi ungaqala ukuzwa zonke izinzuzo njengalezi ebesiphawula ngazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ukushiswa yilanga kunqunu kanye nezinzuzo zako eziyinhloko
Umehluko phakathi kokukhathazeka nokwesaba